Omume kacha mma na SEO na 2013: Iwu 7 nke Egwuregwu | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 14, 2013 Tọzdee, Febụwarị 14, 2013 Jayson DeMers
Site ugbu a, m n'aka na ị nụrụ ezu banyere na-na peeji nke njikarịcha-adịru a ndụ. Achọghị m ikwugharị otu mantras ị na-anụ kemgbe afọ gara aga. Ee, peeji SEO abụrụla ihe dị mkpa (enweghị m ike icheta oge mgbe ọ bụghị), ee, na peeji SEO nwere ike ịme ma ọ bụ mebie ohere gị na ogo elu na Google SERPs. Mana ihe gbanwere bụ ụzọ anyị si aghọta ma na-akpa àgwà na peeji SEO.
Imirikiti SEO na-echekarị maka njikarịcha peeji dị ka ọnụọgụ nke koodu ntinye akọwapụtara nke ọma. Know maara ngwa agha: mkpado meta, canonical URLs, alt tags, encoding kwesịrị ekwesị, nke ọma, aha njirimara-njedebe-na-asọpụrụ aha, wdg.
Ihe ndị ahụ bụ isi. N'oge a, ha bụ ụlọ akwụkwọ ochie. Ha na-aga n'ihu na-egosi na ibe SEO ederede, ma mụ na gị maara na usoro mmadụ dum nke SEO agbanweela nke ukwuu, ọ bụ ezie na usoro isi ahụ ka dị otu. N'ihi mgbanwe ahụ, otu ị si ahụta na ibe SEO ga-agbanwekwa. Nke ahụ bụ ihe anyị ga-eleba anya ugbu a.
Na Peeji SEO: Ntọala
Ọ bụrụ na ejighị weebụsaịtị gị rụọ ọrụ nke ọma na mbọ gị, mbọ gị na weebụsaịtị (njikọ njikọ, azụmaahịa ọdịnaya, mgbasa ozi mmekọrịta) agaghị enwe ike ịpụta nsonaazụ bara ụba. Ọ bụghị na ha agaghị ewepụta ihe ọ bụla ma ọlị, mana ihe karịrị ọkara mbọ gị nwere ike ịkwụsị ịgbada.
Enweghị akwụkwọ iwu doro anya nke na-ekwu: mee X, Y, na Z na njikarịcha peeji ma ọkwa gị ga-ebili site na A, B, ma ọ bụ C. Nchịkọta peeji dị na nyocha, nchịkọta na njehie. Ga-amụtakwu banyere ya site na ịchọpụta ihe anaghị arụ ọrụ karịa ihe na-arụ ọrụ.
Mana n'ime ihe niile ị ga-ebu n'uche, enwere nke a: Ọ bụrụ na ị naghị elekọta SEO peeji gị, ị nwere ike ịda ma ọ bụ nọrọ n'azụ: n'ọkwá, na ntụgharị, na ROI.
Gịnị kpatara Fuss?
Mana nke mbụ ka anyị kpochapụ nke a: Gịnị kpatara mkparịta ụka banyere ibe SEO? Emechakwa, enwere ọtụtụ ihe dị maka ya. Ọtụtụ ndị ọkachamara edeela nke ọma banyere ya.
Ọnọdụ mmadụ na-agbanwe agbanwe nke ihe nchọta ihe na-agbanwe agbanwe gbanwere ihe ndị na-egwu na otu onye si ahọrọ ime SEO. I nweghi ike iche na usoro okwu na ntinye inbound naanị. N'otu aka ahụ, ị ​​gaghịzi eche n'echiche nke meta na alt tags naanị (ee, nke a gụnyere mkpado aha, kwa).
On SEO peeji abụghị naanị otu esi etinye koodu gị na saịtị. Ọ bụkwa banyere otu saịtị gị si yie ọkpụkpụ ọkpụkpụ (anya robot), yana etu websaịtị gị si emeghachi na ntanetị dị iche iche. Ọ gụnyere oge ibu na ikike. Site na ntuziaka nke Google na-aga na 2013 na gafere, o doro anya na ihe ndị dị na peeji na ihe ndị na-apụ na peeji ga-agbakọ ma kwenye na ibe ha n'ụzọ okike, doro anya, nke ọma. Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ inyochagharị na peeji nke SEO nke ọma.
1. Meta Tags Bụ Naanị Mmalite
Anyị amatala ma jiri mkpado meta kemgbe ha batara. Meta "isiokwu" mkpado dị ogologo, dịka SEO ogo ihe, mana emeela ọtụtụ okpomọkụ na mkparịta ụka gbasara ịba uru nke mkpado meta nkọwa site na SEO-nke-ele.
Ihe dị mkpa karịa SEO ogo ihe, bụ eziokwu na meta nkọwa mkpado na-enye ohere iji metụta otu esi egosipụta websaịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ. A nnukwu meta nkọwa mkpado nwere ike nweta gị N'ihi pịa tupu Ihọd ogo gị. Ọ ka bụ ezigbo omume iji mkpụrụokwu mgbe ị nwere ike, yana ihe nchọpụta njirimara mpaghara (mgbe ọdabara), mana nke mbụ kwesịrị ịbụ ebumnuche iji dọta clicks na ụmụ mmadụ.
2. Canonical, Duplicate, Broken Links, wdg.
Google robot aghọọla ezigbo amamihe, ruo n'ókè ebe njikọ ndị mebiri emebi na ibe abụọ mepụtara ọkọlọtọ uhie karịa ngwa ngwa. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe kpatara ị ga - ahụ njikọ njikọ (yana Koodu ha kwekọrọ) dị oke mkpa.
Broken njikọ na dupes abụghị naanị mgbochi SEO. Ha bụ ndị na-emegide onye ọrụ. Kedu ihe bụ mmeghachi omume mbụ gị mgbe ịpịrị njikọ njikọta nke na-egosi njehie ibe?
3. Echiche nke Robot
Ederede ka bụ akụkụ kachasị mkpa na weebụsaịtị ọ bụla ọbụlagodi taa. Ọ bụ ezie na Google na-akwado ụfọdụ vidiyo na mgbasa ozi dị elu karịa ndị ọzọ maka isiokwu ụfọdụ, ebe nrụọrụ weebụ dị mma na nke nwere ọdịnaya ka na-achị achị.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke zuru oke, nsonaazụ ya bụ ezigbo otu weebụsaịtị gị si ele crawler anya. Ugbu a, nyochaa ihe niile dị na ndepụta ndị a:
Akara gị ọ na egosiputa dịka ederede?
Igodo ahụ na-arụ ọrụ nke ọma? Ọ na-agbaji?
Bụ isi ọdịnaya nke gị na peeji nke na-egosi na nri mgbe igodo?
Onwere ihe zoro ezo nke gosipụtara mgbe JS nwere nkwarụ?
Ndi haziri ọdịnaya a nke ọma?
Ndị ọzọ niile peeji (peeji, ọkọlọtọ oyiyi, ịrịba ama-elu, njikọ, wdg) na-egosi mgbe isi ọdịnaya?
Ebumnuche bụ isi bụ ijide n'aka na isi ọdịnaya (akụkụ ịchọrọ ka Google mara) na-abịa n'oge ọ bụla o kwere omume na isiokwu dị mkpa na nkọwa dị.
4. Ibu Ibu Ogologo Oge na Ogo
Google ekwuola ogologo na ogo oge nke ibe. Nke a na-abanye na algorithm ogo site n'ọtụtụ ọnụ ma na-emetụta ọnọdụ gị na SERPs. Nke a pụtara na ị nwere ike ịnwe ezigbo ọdịnaya na weebụsaịtị gị, mana ọ bụrụ na ibe ndị ahụ ji nwayọ nwayọ, Google ga-akpachara anya maka ịkwalite gị elu karịa weebụsaịtị ndị ọzọ na-ebu ngwa ngwa.
5. Chee echiche na ekwentị, chee echiche
Nke a bụ otu n'ime isiokwu ndị a na-ekwukarị banyere azụmaahịa n'ịntanetị taa. Si mobile mgbasa ozi na obodo search ka ahịa na-emekarị na desktọọpụ / mbadamba oriri, o doro anya na-akpụ akpụ n'ebe a mobile-kachasị saịtị bụ ife nke ọdịnihu.
Mgbe ị na-eche maka ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka / na-anabata, olee otu ị ga-esi mee ya? Na-azaghachi dị ka ajụjụ mgbasa ozi CSS, ma ọ bụ ngalaba ọhụrụ niile dịka “m.domain.com”? A na-atụ aro nke mbụ mgbe mgbe n'ihi na nke a na-edebe ihe n'otu ngalaba (njikọ ihe ọ juiceụ juiceụ, enweghị mbiputegharị, wdg). Ọ na-eme ka ihe dị mfe.
6. Nchịkwa & Onye edemedeRank
Onye edemede-meta na-enweta mgbazinye ọhụụ na ndụ yana Google na-akwalite Onye edemedeRank metrik. Otú ọ dị, ọ dị ntakịrị karịa nke ahụ ugbu a. Ga-enwerịrị snippets bara ụba maka ebe nrụọrụ weebụ gị, gbaa mbọ hụ na profaịlụ Google gị juputara, ma jikọta ha na blọọgụ / weebụsaịtị gị. AuthorRank aburula ihe di oke nkpa na nke di egwu nke metutara onu ogugu, ma obu otu uzo nke uzo SEO nke ichoro ime. Ọ bụghị naanị na ọ ga - eme ka ọkwa gị dịkwuo mma, mana ọ ga - emekwa ka ịpị ịpị site na SERPs.
7. Kere ekwesịghị ịbụ ihe ikpeazụ na ndepụta gị
N'ụzọ na-emegide onwe m, ekwesịrị m ịde banyere nke a dị ka ihe ikpeazụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-echeta naanị ihe ikpeazụ ha gụrụ na otu isiokwu. Hardcore SEO ndị mmadụ na-elegharakarị mkpa imewe anya.
Aesthetics na readability sitere na nhazi nke weebụsaịtị. Google dị mma n'ịchọpụta ihe na-egosi "n'elu ogige" na weebụsaịtị, Google na-atụ aro n'ụzọ doro anya ka ị debe ọdịnaya dị n'elu okpukpu ahụ ka ndị na-agụ gị wee mesoo ha ozi karịa mgbasa ozi.
Peeji nke SEO abughi nani maka meta meta na URL. Ọ bụ maka otu websaịtị gị si jikọọ na onye ọrụ yana robọt. Ọ bụ maka otu ị ga - esi hụ na webụsaịtị gị nwere ike ịnweta ma nwee ike ịgụta ya, ma ka nwere ozi zuru oke n’okpuru igwe maka ngwa nyocha iji bulie ngwa ngwa.
Tags: na peeji nke seona saịtị ahụ seoebe ozosearch engine njikarịchaA
Feb 14, 2013 na 6:37 PM
Yabụ na ọ dị ka ezigbo omume SEO kacha dị na peeji bụ ezigbo azụmaahịa kacha mma na peeji nke yana ndị di na nwunye maka crawler. Akwa post.
Feb 14, 2013 na 7:12 PM
Feb 16, 2013 n’elekere 3:18 nke abali
Ezigbo ederede mana ahụghị ihe ọhụụ na ya !!
Thanx Jayson dee edemede bara uru.
Daalụ maka ndụmọdụ Jay, ị na-edebe m oge niile na egwuregwu SEO.
Aga m na-enye ndị otu anyị ihe ngosi gbasara SEO maka ụzọ ndu na nke a nyere aka. Daalụ! Nwee anụrị Fraide.
Annie Johnson kwuru
Ọmarịcha blog dị ezigbo Ama….
nwetaghachi azụ SEO m maka dummies
Jayson - ọdịnaya onye ọrụ anyị. Anyị na-enye ndị ọrụ ohere ihichapụ ọdịnaya ha. Ọ bụrụ na ịnwe njikọ agbajiri emetụta ọnọdụ SEO anyị, kedu ka m ga - esi mee ya n'eziokwu na onye ọrụ nwere ike ikpebi iwepu otu ọdịnaya mgbe injin nyocha edepụtara ya?
Mee 3, 2013 na 2: 43 AM
Akwa post Jayson, daalụ maka ịkekọrịta 🙂 ị nwere ike ịkwado omume kacha mma maka meta-mkpado?
Mee 3, 2013 na 8: 10 AM
Nkọwapụta Meta dị oke egwu n'ịmegharị ndị ọrụ nchọta ihe iji pịa, na-enwekarị mkpado nkọwa meta. Meta Keywords tag na-aga n'ihu na-eleghara ya anya site na engines ọchụchọ mana ụfọdụ ngwa nyocha na-eji ha. Mkpado ihu igwe nke ala egosibeghị nkwa dị ukwuu, mana m ga-etinye ha na data ọ bụla metụtara mpaghara. Nke ahụ ọ na-enyere aka?
Mee 3, 2013 na 10: 06 AM
Ndewo Douglas, daalụ maka ihe ndị a: ọ dị mma ịnweta ndụmọdụ gị! ụfọdụ ndị gwara anyị na anyị na SEO na mkpado adịghị mma, na m tụgharịrị ka Uru maka enyemaka 🙂 a na-enyere! gịnị banyere ogologo aha ahụ kwesịrị ịdị?
Mee 3, 2013 na 10: 28 AM
Chọpụta - aha kwesịrị ịdị n'okpuru mkpụrụ edemede 70. Mee ọchụchọ maka “Otu esi ebuli elu” na blọọgụ a ma anyị nwere ọmarịcha ezigbo usoro site na ntụzi ụkwụ!
Mee 15, 2013 na 3: 27 AM
Isiokwu a na-enye aka. M tinye ha n'ọrụ na saịtị m. Oge m na-arụ ọrụ na saịtị m bụ 88. Mkpado na js tinye nke ọma, mana ọkwa m bụ naanị 2. you nwere aro ka m ga - esi mee ọkwa dị elu maka saiti m.
Mee 21, 2013 na 12: 56 PM
M na-agụ ọtụtụ ndụmọdụ n'oge na-adịbeghị anya banyere 'n'elu ọdịnaya atụrụ'. Nke a ọ pụtara na ụdị template / isiokwu isiokwu anyị na-ahụ ebe ahụ - nnukwu ihe mmịfe dị n'elu, 3-4 ọdịnaya dị n'okpuru, yana ọdịnaya ahụ na ala - na-agbaso ndụmọdụ ahụ kpọmkwem?
Mee 21, 2013 na 1: 05 PM
@ google-323434ee3d2d39bcbda81f3065830816: disqus ụfọdụ ndị kasị mma n'ịtụgharị peeji nke na arentanetị bụ nnọọ ogologo, na ogologo oyiri, testimonials, reviews na ngwaahịa nkọwa. “N’elu igwe-atụrụ” na-aga n’ihu na-esekwu clicks na nkezi, mana ndị ọrụ na-eji pịgharịa ma echeghị ya. M ga-emehie n'akụkụ ule ma hụ tupu m mee ihe niile dị mkpụmkpụ.
Mee 21, 2013 na 1: 20 PM
Daalụ @douglaskarr: disqus .. ị na-ekwu maka ahụmịhe onye ọrụ na CTR, mana ihe metụtara m na edemede a (na ndị ọzọ), bụ echiche na, "Google dị mma n'ịchọpụta ihe na-egosi" n'elu ogige atụrụ "na na ebe nrụọrụ weebụ ”. Nke a na-eme ka m chee ma a na-ata ọbụna saịtị na-arụ ọrụ nke ọma n'akụkụ ux / ntụgharị ihu n'ụzọ ụfọdụ. Echiche ọ bụla na nke ahụ ka ọ bụ na m na-agụ ya?
Mee 21, 2013 na 1: 24 PM
Agaghị m agbanye Google na ahụmịhe onye ọrụ. N'ezie, m ga-arụ ụka na saịtị ndị nwere ọdịnaya peeji na-emighị emi na-esikarị ike ọkwa. Ndị ahịa anyị na-ahụ nsonaazụ ka mma mgbe ha nwere 'ọdịnaya' buru ibu. Ọ bụrụ na ndị ọrụ gị hụrụ ọdịnaya gị n'anya, Google ga-ahụ ọdịnaya gị n'anya!
Jun 21, 2013 na 3:06 AM
Ezigbo. Daalụ maka ichetara m banyere mkpa ọgaranya snippet na-ede akwụkwọ ọkwá.
Nov 4, 2013 na 7:03 AM
Enwere m ekele maka mgbalị ị tinyeworo n'isiokwu a iji nye gị ezigbo na SEO kacha mma omume ka ọ dị elu na engines ọchụchọ. Ihe ndị a na-abụkarị ihe elere anya dị ka ọtụtụ na-emesi ike naanị na mkpado meta, aha peeji na isiokwu yana wdg na-eleghara ihe ndị dị mkpa dị mkpa ọchụchọ anya. Daalụ.